भोगटेलाई फुटबल बनाएर खेल्दै हुर्केका राप्रपाका नेता श्याम बहादुर खड्का – HarekNews
भोगटेलाई फुटबल बनाएर खेल्दै हुर्केका राप्रपाका नेता श्याम बहादुर खड्का
in अन्तर्वार्ता, तस्वीर, ताजा समाचार ११ मंसिर २०७३, शनिबार ११:४५	0
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रिय सदस्य श्याम बहादुर खड्का एकजना कुशल राजनीतिज्ञका साथै सफल व्यवसायी तथा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ । राप्रपा नेपाल र राप्रपाबिच पार्टी एकिकरण भएपछि झन् उहाँ राजनीतिक परामर्श र छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँको राजनीतिक जीवन,व्यवसायीक जीवन लगायतबारे हरेकन्युजकर्मीले गरेको कुराकानी –
 स्वागत छ सर यहाँलाई
 व्यस्त के मा हुनुहुन्छ आजभोलि ?
विशेषगरी राजनीतिक क्रियाकलापको साथै व्यवसायीक जीवन पनि अगाडी बढाइरहेको छु । विशेषगरी बर्षौदेखि खड्का नर्सरी सञ्चालन गर्दै आएको छु । परिवारका अन्य सदस्य व्यवसायमा व्यस्त हुन्छन् म भने संरक्षकको रुपमा सहयोग गर्दै आएको छु ।
 यहाँको जन्म कहाँ भएको हो ? बाल्यकाल कसरी बिताउनुभयो ?
काठमाण्डौकै महाराजगंज वडा नम्बर ४ मा म विं सं. २००८ साल साउनमा भएको हो । म ६ बर्षको उमेरको हुँदा मेरो पिताको स्वर्गारोहण भयो । मेरो माताको पालनपोषणमा ठूलो कष्टका साथ मेरो बाल्यकाल बित्यो । दुःखसुःख भोग्दै म हुर्किएको हुँ ।
 कुन सन्तानको रुपमा यहाँको जन्म भयो ?
म माइलो छोरोको रुपमा जन्मिएको हुँ । हामी ३ जना दाजुभाई छौँ । कान्छी बहिनी छिन् । काठमाण्डौमै हुर्किएतापनि दुःख नै थियो । काठमाण्डौ आफैमा त्यो समय कृषिमा आधारित हुनुपर्ने अवस्था थियो । समय बद्लिएर अहिले काठमाण्डौमा खाली जग्गा भेट्न मुस्किल छ । त्यसबेला काठमाण्डौमा तरकारी आफ्नै घरआँगनमा उत्पादन हुन्थ्यो ।
 बाल्यकालको स्वभावचाँहि कस्तो थियो ?
वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म पनि कसैलाई दुःख नदिऊँ भन्ने छ । आफू बाचौँ र अरुलाई पनि बचाऔँ भन्ने भावना छ । त्यसबेला पनि कोहिसँग झैझगडा रिसराग भएन ।
 पढाईबाहेक के मा रुची थियो यहाँको ?
बाल्यकालमा मेरो रुची फुटबलमा थियो । भोगटेलाई बल बनाएर समेत हामी फुटबल खेल्थ्यौँ । पारिवारिक जिम्मेवारी र अन्य कारणले समेत फुटबललाई व्यवसायीकता दिन सकिएन । कहिलेकाँही फिल्म हेर्न गइन्थ्यो । त्यसबेला फिल्म हल समेत कम थिए ।
 कस्तो परिवारमा हुर्किनुभयो ? उच्च, मध्यम वा निम्न ?
त्यसबेला पनि हाम्रो परिवार मध्यमबर्गीय नै थियो । खान लाउन दुःख भन्ने कुरा त थिएन । यद्यपी सानै उमेरदेखि पिता गुमाउनुपर्दाको पिडा, अभिभावक नहुँदाको अवस्थामा दुःख त हुने नै भयो । यतिबेला पनि मेरो परिवारको आर्थिक अवस्था मध्यमबर्गीय छ ।
 यहाँको जीवनमा, प्रेमी प्रमिकाबिच हुने प्रेम प्रसंग कसरी लागु हुन्छ ?
हेर्नुस्, त्यसबेला अहिलेको जस्तो सुचनाप्रविधीको विकास थिएन । सञ्चारको विकास थिएन । मोबाईल फोन थिएन । समाज समेत अहिलेको भन्दा वास्तवमै शुसभ्य थियो । त्यसबेला कोहिसँग नजिक भइए पनि केवल जीवनलाई कसरी अगाडी बढाउने,कसरी राम्रो काम गर्ने भन्नेजस्ता गम्भिर कुराकानी हुन्थे । त्यसबेला अहिलेको जस्तो पार्क,रेष्टुरेन्ट थिएन । जहाँ पायो त्यहिँ भेटौँ भन्ने परिस्थिति थिएन ।
 वैवाहिक जीवनमा चाँहि कसरी गासिनुभयो ?
मैले मागी विवाह नै गरेको हुँ । ममीको सल्लाहबमोजिम पारीवारिक सरसल्लाहमै २०३० सालमा विवाह भएको हो ।
 परिवारमा को को हुनुहुन्छ ?
मेरो २ जना छोरा र एकजना छोरी छन् । विशेष कारणबश मेरो २ वटा विवाह भयो ।
 त्यसपछि कसरी जीवन अगाडी बढाउनुभयो ?
त्यसपछि व्यवसायीक जीवनसमेत अगाडी बढाइयो । तत्कालिन् श्री ५ सरकारको सेवामा समेत म कार्यरत थिएँ ।
 खड्का नर्सरी सञ्चालनमा आएको कति भयो सर ?
करिब २० बर्ष भयो । त्यसबेला नर्सरी कम थियो । यो व्यवसाय निकै राम्रो पनि हुन्छ । समाजसेवा पनि यसमा जोडिन्छ,वातावरण जोगाउने काम समेत हुन्छ । जीवनसँग फूलको सम्बन्ध निकट हुन्छ,घनिष्ट हुन्छ,आत्मीय हुन्छ । करिब २५÷३० जनालाई हामीले रोजगारी दिएका छौँ । यस नर्सरीमा धेरै नै विभिन्न बोटविरुवा,औषधीजन्य बोटविरुवादेखि सिजनेवल फूलहरु समेत यहाँ पाइन्छ । हामी कोलकत्ता,दार्जिलिङबाट समेत आउछ फूलहरु,बोटविरुवा र हामी त्यहाँ पनि निर्यात गर्छौँ । देशका अन्य ठाँउमा निर्यात गर्छौँ ।
 अब राजनीतिको कुरा गरौँ । राजनीतिमा रुची कहिलेदेखि थियो ?
मेरो पहिलेदेखि नै राजनीतिमा रुची थियो । राजनीति देशविकासको एउटा आधार हो । म राजनीतिमा बढी नै सक्रियरुपमा लागेको भनेको पछिल्लो समयमा हो । किनकी नेपालमा धर्म हुनुपर्छ,राजा हुनुपर्छ,अखण्ड देश हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु । त्यसैले विंस. २०६२÷६३ सालको आन्दोलनपछि कमल थापाबाट गठित राप्रपा नेपालमा म आवद्ध भएँ ।
अहिले भने राप्रपा र राप्रपा नेपालबिच एकिकरण भइसकेको छ र पार्टीको नाम राप्रपा भएको छ । नेपालमा संघियताको कुरा धर्मनिरपेक्षताको कुरा ल्याएर नेपालको पहिचान, परम्परा धरापमा पार्ने काम भएको छ । किनकी पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरण गरेको यो मुलुकलाई संघियताको नाममा टुंक्र्याउने काम हुदैछ । नेपाल सनातन् हिन्दुराष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अघि बढिरहेका छौँ ।
 तपाई राप्रपाको एक प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, अब देशको राजनीती कता जान्छहोला ?अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
हामी जनताकै लागी राजनीतिमा लागेका हुन्छौँ । देशविकासकै लागि लागेका हुन्छौँ । तर ठूला भनिएका राजनीतिक दलले आफ्नै हितको लागि डम्फू बजाइरहेका छन् । जनताप्रति नै बफादारी भएर राजनीतिलाई अगाडी बढाउन सके देश विकास हुने छ । आर्थिक समृद्धि हुनेछ । विशेषगरी जनताकै पक्षमा काम गर्न भनेर हामी दुई पार्टी एक भएका छौँ । हामी निरन्तर जनताको पक्षमा लाग्नेछौँ ।
 महत्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद ।
धन्यवाद तपाईको सम्पूर्ण टिमलाई । धन्यवाद ।
११ मंसिर २०७३, शनिबार ११:४५